Faa'iidooyinka la istcimaalo Isticmaalidda Kaamirada Jidhka Booliska Xalka OMG
Camera digniinta jirka waxaa sidoo kale loo yaqaan BWV (Video Worn Video) waxayna u adeegtaa sidii muuqaal muuqaal ah, maqal ama muuqaal sawir qaas ah oo loogu talagalay saraakiisha booliiska. Kaamirooyinka noocan oo kale ah waxay leeyihiin adeegyo iyo qaabab kooban oo xadidan, kuwaas oo si gaar ah loogu istcimaalo qayb ka mid ah qalabka bilayska. Marka laga reebo bilayska inay adeegsadaan, kaamirooyinkaan waxaa sidoo kale loo isticmaalaa warshado kala duwan sida ganacsiga, daryeelka caafimaadka, adeegsiga caafimaadka, isticmaalka militariga, dadka rayidka ah waxay kaloo isticmaali karaan kamaradaha xiran, iyo joornaaliisnimada. Warbixinta Nascent ayaa muujineysa caddeyn isku dhafan oo ku saabsan saameynta ay kaamirooyinka duugoobay ay u adeegsadeen xoogagga bulshada iyo kalsoonida sharci fulinta ee booliska.
BWCs waxaa si gaar ah loogu talagalay in lagu qalabeeyo mid ka mid ah saddexda qaybood ee jidhka, sida guluubka, koofiyadda, ama muraayadaha indhaha. Kaamirooyinka qaarkood waxay la imaadaan astaamo qulqulka tooska ah, halka kuwa kalena ay diiradda saarayaan kaydinta maxalliga ah ee la mid ah Rikoorada Codka Digital. Hay'ado dhawr ah, oo ay kujiraan Xarunta Qiimaynta iyo Cilmi-baarista Tiknolojiyadda Caddaaladda Dembiyada Qaranka (NJTR) ayaa sameeyey dhowr sahan oo laga qaaday kaamirooyinka jirka si ay uga caawiyaan ururrada sidii ay u soo iibsan lahaayeen kuwa ugu wanaagsan. Si kastaba ha noqotee, daraasaddu waxay sharraxaysaa qalabka optics-ka, waxqabadka, GPS, maqalka, iyo qaybaha kale.
Kaamirooyinkaas waxaa loo isticmaalaa meelo kala duwan, magacyadooduna waa kuwan soo socda:
Jirka Worn Cameras waxaa si gaar ah loogu sameeyay booliiska iyo xoojinta sharciga si loo ilaaliyo nabada magaalada oo dhan ama adduunka oo dhan. Si kastaba ha noqotee, kaamirooyinkaas waxaa loogu talagalay in lagu xoojiyo is dhex galka shacabka iyo saraakiisha booliska. Sidaa daraadeed, jiilkii ugu horreeyay ee kaamirooyinka jirka ee cusub ee booliska xiran ayaa lagu siidaayay agagaarka 2005 gudaha Boqortooyada Midowday. Si kastaba ha noqotee, waxaa la raacayaa laga bilaabo 2014 wixii ka dambeeya hirgelin ballaaran oo Mareykanka ah si loo kordhiyo isla xisaabtanka booliiska iyo daah furnaanta. Intaa ka dib, dalal kale oo badan ayaa raacday isla tillaabooyinkaas oo naftooda ku hawlan sidii ay u sii socon lahaayeen. Daraasadihii hore ee hore waxay muujinayaan saameynta togan, laakiin soo-saarista ayaa leh dib u eegisyo isku dhafan. Natiijooyinka ayaa la soo bandhigay qaar ka mid ah warbixino kala duwan oo kuxiran duruufaha maxalliga ah iyo tilmaamaha kamaradaha jirka. Caqabado badan oo ay ka mid yihiin:
Kaamirooyinka jirka iyo koofiyadaha labadaba waxaa loo isticmaalaa ururka milatariga. Si kastaba ha noqotee, fiidiyowyada ayaa lagu kaydin karaa gudaha ama toos loogu diri karaa xarunta taliska ama dibedda ee milatariga.
Waa kuwan qaar ka mid ah faa'iidooyinka Booliiska-Worn Cameras oo aad jeclaan lahayd inaad wax akhrido
Sida laga soo xigtay saraakiisha booliska ee adeegsada kaamirooyinkaas ayaa sheegaya inay abuurayaan isla xisaabtan iyo daah furnaan si loo naaquso rabshadaha ka dhanka ah booliska. Intaa waxaa sii dheer, waxay xuseen in kaamirooyinka jirka ay bixiyaan caddeyn ay ugu baahan yihiin inay caddeeyaan ama ay beeniyaan eedeymaha anshax xumada ah oo ay aalad wanaagsan u yihiin tababarka booliiska iyo sidoo kale inay siiyaan ilaalin iyo taageero shacabka. Ka soo horjeedda xoogaga booliiska ee adeegsada kamaradaha jirka ayaa sheegaya in kaamirooyinka xirtay ay si xun u saameeyeen caafimaadka jireed iyo maskaxeed ee isticmaaleyaasha iyaga oo ku buux dhaafiyey qalabka noocaas ah iyo culeyska duubaya duubista fiidiyowga joogtada ah. Aynu u nimaadno dulucda oo aan ka wada hadalno faa'iidooyinka kaamirooyinka jirka xiran ee Booliska.
Lama hubo, dadku adduunka oo dhan way u dhaqmaan si ka duwan markay ogaadaan in filim laga duulayo. Sidaa daraadeed, kaamirooyinka jirka ee booliisku waxay dhiiri gelin karaan anshaxa asluubta ee saraakiisha booliiska ee bulshada hortiisa sharcigana waxaa sidoo kale lagu dabaqayaa dadweynaha, taasoo horseedaysa hoos u dhaca heerka dambiyada, sameynta isticmaalka dhacdooyinka xoogga oo ka hortaga dadka weerara saraakiisha shaqada heeganka ah. Sida laga soo xigtay daraasadda Rialto, saamiga dambiyada 50% ayaa yaraanaya sababtoo ah kaamirooyinka jirka ee boolisku xirtay inta lagu gudajiray kamarado jirka booliiska. Si la yaab leh, cabashooyinka ka dhanka ah saraakiisha ayaa si otomaatig ah uga soo dhacay 28 illaa 3 inta lagu gudajiray sanadka maxkamadaynta.
Ka ilaalinta saraakiisha Boliiska dhacdooyinka beenta ah iyo anshax xumada
Sidii aan kor ku soo sheegay, Boliska Gaarka ah ee Booliska ayaa heley Kaamirooyinka (ee loo galey PBWC) labadaba waxay bixiyaan caddeyn maqal iyo muuqaal ah oo la xaqiijin karo wixii khaldamay waqtiga la siiyay. Tiknolojiyadda noocan oo kale ah ayaa faa'iido u leh labada dhinacba sida Saraakiisha Booliska iyo Dadweynaha. Askar kasta oo booliis ah waa lala socon karaa iyadoo la adeegsanayo tikniyoolajiyaddan anshax xumada ah ee lagula dhaqmo qof rayid ah, halka qof kasta oo ka tirsan dadweynaha la qabsan doono oo isku dayo inuu been abuur ku sameeyo saraakiisha booliis kasta. Waxaan u tirineynaa mid ka mid ah faa'iidooyinka ugu wanaagsan maxaa yeelay waxay nabad ugu tahay labada dhinacba. Dhowr sarkaal oo booliis ah oo ka mid ah waddammada ay ka jiraan tikniyoolajiyaddan ayaa lagu ciqaabaa saraakiisha bilayska iyo sidoo kale dadweynaha sababta oo ah anshax xumo awgeed.
Aalad aad u fiican oo wax lagu barto isla markaana taageero muuqata ka leh dadweynaha
Laba faa iido kadib, waxaa jira saddexaad oo fiidiyowga laga duubay Police Body-Worn Cameras oo loo isticmaali karo in lagu tababaro saraakiisha booliiska ee jira iyo kuwa cusubba. Sidaa daraadeed, Qeybta Booliska Miami waxay bilaabeen inay adeegsadaan tikniyoolajiyadan oo ay ku dhawaaqaan qayb ka mid ah qalabka booliiska tan iyo 2012. Sababta oo ah kaamirooyinka oo xiran, dadku waxay dareemayaan xasillooni dheeraad ah, iyo dhaqanka boliiska gebi ahaanba isbedelay dhanka dadweynaha. Hadda, waxay la hadlaan anshax xushmad iyo xushmad leh. Maalmahan, waxaa jira laamo fara badan oo ah nooca 'Body Warn Camera', oo ay ka mid yihiin:
Mini WIFI GPS / 3G / 4G Camera Worn Camera
Duubista Kaamiradda-Worn Camera
Kaarka SD Kaar Dabeysnaa Kaameerada Worn
Ku adkee kamarad yar oo Worn Camera ah oo ay ku qoran tahay Encryption + LCD
Kuwani dhammaantood waa kaamirooyin jirka oo qurux badan oo loo adeegsaday nabadgelyo aan caadi ahayn, oo haddii aad raadinayso inaad haysato kamarad noocan ah waad booqan kartaa omg-solutions.com. Waxaad ka heli kartaa wax soo saar kasta oo iyaga ka mid ah qiimo macquul ah. In kasta oo ay adeegsanayso abaabul, haddana muwaadiniinta ayaa waliba loo oggol yahay inay u helaan ammaankooda. Sidii aan kor ku soo sheegay, ma jiraan warbixino xunxun marka loo eego kaamirooyinka jirka ee gaboobay, laakiin si uun bay u saameyn doontaa caafimaadkaaga jirka ama laga yaabee caafimaadka maskaxda. Adduunyada, wax walbaa waxay leeyihiin faa'iidooyin iyo faa'iido darro, haddii aan raacno qaanuunka markaa waxaa la xaqiijiyey in Booliska Worn Body Cameras ay leeyihiin faa'iidooyin sidoo kale. Marka waa kuwan liistada dhaqsaha ee faa'iido darrooyinka (qasaarooyinka) si aad u aragto.
Kamaradahaasi waa kuwo aan la isku halleyn karin oo aad qaali u ah
Ku soo dhowow Asturnaanta Dadweynaha, u bandhig dhibanayaasha, Xiriirka burburka ee bulshada iyo booliiska
Iyada oo la adeegsanayo Cameras, amniga booliisku khatar ayuu ku jiraa mar kasta.
Faa'iidooyinka la istcimaalo Isticmaalidda Kaamirada Jidhka Booliska ahaa kii ugu dambeeyey: September 26th, 2019 by admin
2494 Wadarta Views 4 Views Maanta